China Oak Wadhirobe Chinyararire Damping Slide Rail Sliding Door Wadhirobe Wemba Imba Yekuvata Furniture # 0108 Kugadzira uye Fekitori | Yamazonhome
Oak Wadhirobe Silent Damping Slide Rail Sliding Door Wadhirobe Yekurara Midziyo # 0108
Muenzaniso nhamba: Amac-01 08
Kukura: 1600mm * 560 * 2000mm
Dhizaini-gadzira imba padhuze nemasikirwo
Chinangwa chedu chepakutanga chaive chekugadzira imba yakashongedzwa yeChinese yepakati kirasi. Rega zuva reNordic rivhenekere zvinyoronyoro imba, uye dhizaini yakapusa asi isiri nyore inodzosera imba kurunako rwechokwadi.
White oak inotengeswa kubva kuNorth America kugadzira yakachena solid huni furemu
Iyo yakasarudzika kusarudzwa kwemidziyo ndeye chete yemhando yepamusoro fenicha, uye iyo chaiyo huni tsanga yemvura inoyerera inounza inofadza uye yakanaka mamiriro. Iyo hombe slab yakagadzirirwa zvakananga uye hunyanzvi hwakanakisa. Tinotanga tacheka huni kuita 5-11cm. Iyi upamhi inogona kuvimbisa huni. Iyo yakagadzikana huni yakaremara uye inogona kuratidza yakakwana uye inotsvedzerera tsanga yehuni, uyezve iro ruvara runosarudzwa neane ruzivo rwehuni. Zviyo nebhodhi zvinoenderana.
Push-dhonza dhirowa + yakasimba huni hanger
Dhirowa rekuburitsa rinoenderana nebhodhi fenzi pazasi kuti chigadziro chiwedzere kunzwisisika uye chakatsvinda. Zvepachivande zvinhu zvinogona kuiswa mudhirowa, uye fenzi bhodhi rinogona kuturika matauro, masherefu, nezvimwe. Iyo fenicha yakanyatsogadziriswa yezvakakwira-magadziriso ane akasiyana siyana emhando dzakasiyana uye akasiyana zvinhu. Kuti usangane nezvinodiwa zvakasiyana zvekushongedza uye zvekushongedza, ese akanyatso kutevedzera zvinodiwa zvepasirese zviyero, uye akaitwa akawanda acid-base uye ngura bvunzo kuti ave nechokwadi chekuti havazoremara kwekushandisa kwenguva refu.
Nyarara Hardware inotsvedza
Simbi inotungamira njanji, inotsvedzerera uye yakanyarara. Pese paunovhura nekuvhara, unogona kuve wakasununguka uye wakanaka mamiriro. Iyo yepaneru pani inowedzera 10mm uye inokodzera iyo pasuru musu furemu. Kana musuwo unotsvedza wavharwa, hapana gwanza uye hapana guruva.
Yemahara inoenderana yepamusoro kabhineti
Iine kabhodhi yepamusoro, nzvimbo yakatwasuka inoshandiswa zvakanyanya, uye dambudziko rekuchengetera-kwemwaka-wenguva zvipfeko zvekuchengetera rinogadziriswa neimwe yepamusoro cabinet. Kuwedzera majoini ndiyo "yekuzvidzivirira sisitimu" yemidziyo yakasimba yehuni, uye inochengeterwa kugadzirisa huni hwakasimba kunzvimbo dzakasiyana. Iyo nzira yekugadzira yakanyatso kudzorwa, uye chiitiko chekugadzira chakapfuma. Mushure mekuwandisa maitiro ekukuya uye ekugaya, pamusoro peiyo yakapera chigadzirwa yakatenderera uye yakatsetseka.
Hapana kabhoni gumbo dhizaini
Izvo zvikamu zvakakosha zvakabatana neyakajairwa tenon uye tenon maitiro, chimiro chakasimba, uye iwo akasimba maseams anogona kunyatso kugadzirisa kugadzikana kwewadhirobe uye kuwedzera hupenyu hwebasa. Iyo yepasi-yakamira hwaro yakatsiga uye isina yekuchenesa, uye mupendero unotora chamfered yemukati chimiro kudzivirira bumping kukuvara mukushandisa kwemazuva ese.
Pashure: Yese Solid Wood Chest yeMadhirowa Ekugara Kamuri yekurara Yemubhedha Nightwatch # 0103
Zvadaro: Yakareruka Western Dhizaini Yakasimba Solid Wood Wood Mubhedha Wepamba Yemakamuri Furniture Mubhedha # 0109
Computer Desk Rakareruka Desk Modular Furniture 0314
Kurarama Kamuri Solid Wood Kudonhedza Sofa # 0026
Heller Mhuka Hutch neRamp Rabbit Hutch Pet ...
2019 itsva akamira SUP surfboard yokufaranuka mvura s ...
Yemazuva ano uye yakapusa Solid Wood Diki Imba TV ...
Fashoni diki imba yekutandarira imba yakasimba huni ...